mercredi, 01 août 2018 22:57
Andry Rajoelina: Nanambara ny firotsahan-kofidiany ho filoham-pirenena
Tao amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina no nanaovany fanambarana fa : “androany 1 aogositra 2018, izaho Andry Rajoelina dia manambara amin'ny fomba ofisialy fa manolo-tena ho an’ny Tanindrazana ka hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena, hirotsaka ho fidiana hiadidy ny fampandrosoana ny Repoblikan’i Madagasikara”. Tsy kandidan’antoko aho hoy izy nanoloana ireo mpomba azy sy mpanao politika manohana azy, nahitana Senatera HVM.
mercredi, 01 août 2018 22:43
Mahajanga: Raikitra anaty romoromo ny adina ara-panatanjahantena bakalorea
Nandeha ihany ny adina ara-panatanjahantena bakalorea teto Mahajanga androany, na tsy nankasitraka ny hanatontosana izany aza ireo mpampianatra mpanao fitokonana.
Niara-niatrana tamin'ireo mpianatra hiadina teny amin'ny kianja Rabemanajara ireo mpampianatra ireo, ary nanamafy fa tsy handeha ny EPS bakalorea. Tonga ara-potoana anefa ny mpitandro ny filaminana nandamina ka mampiditra ireo mpianatra sy nanala ireo mpanao fitokonana.
mercredi, 01 août 2018 22:25
Fanirisoa Ernaivo: Nanambara ampahibemaso fa kandidà amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena
Nanolotra ny tso-drano ho an’ny filatsaha-kofidian’i Fanirisoa Ernaivo ho filoham-pirenena taty amin’ny Distrikan’Ambalavao ny raiamandreny aty an-toerana ny andron’ity alarobia 1 aogositra ity.
mercredi, 01 août 2018 22:21
Ministeran’ny varotra sy fanjifana: Mitokona ny mpiasa
Mitaky ny fialan’ny Talen’ny kabinetra sy ireo mpiara-miasa akaiky amin’ny minisitra Yvette Sylla ireo mpiasa mitokona nanomboka tamin’ny alatsinainy.
mercredi, 01 août 2018 22:13
Fanirisoa Ernaivo: Midina ifotony
Mitsidika an'i Faritr'i Matsiatra Ambony ny andron'ity alarobia 1 Aogositra ity. Hanatanteraka fidinana any amin'ny distrikan'Ambalavao izy araky ny fandaharam-potoana.
Mikarakara sy manomana izany ny antoko Zama na Zanak'i Madagasikara.
Tamin'ny 10h30 teo izy no nigadona tamin'ny fiaramanidina teto Fianarantsoa.
mercredi, 01 août 2018 22:08
Solika: Niaka-bidy indray
50 Ariary isaky ny litatra ny fiakarana mihatra amin'ireo toby mpaninjara solika nanomboka io maraina io.
Ranomafana Ifanadiana: Notafihin’ny dahalo nandritra ny adin’ny roa ny tanàna Ambatolahy
Nitrangana fanafihana mitam-basy tao Ambatolahy, tanàna iray somary anaty ala ao anatin’ny Kaominina Ranomafana, Distrika Ifanadiana. Dahalo mitam-basy efapolo lahy no niditra ny tanàna nanomboka tamin’ny 5ora sy sasany hariva. Tovolahy iray no maty voatifitra, roa hafa naratra voafira famaky.
Nitsoaka nanavotr’aina tany anaty ala ny ankamaroan’ny mponina, izay tavela noteren’izy ireo hanome vola sy fitaovana ary fiaravaka sarobidy.
Notetezin’ireo dahalo ny trano efa ho dimapolo tafo ao Ambatolahy nandritra ny ora rao latsaka. Lasa ny lelavola 1,8 tapitrisa Ariary, noraofin’izy ireo ny entana tamin’ireo «épicerie» tao an-tanàna tombanana any amin’ny 4 hetsy Ariary.
Tonga nanavotra ny mponina ny Zandary avy ao Ranomafana, nisy ny fifamaliana tifitra tao anaty haizina vao vaky nandositra ireo olon-dratsy.